Diyaaradii ugu horeysay ee si toos ah u tageysa Maraykanka oo xalay duushay – The Voice of Northeastern Kenya
Diyaaradii ugu horeysay ee si toos ah u tageysa Maraykanka oo xalay duushay
Madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa xalay si rasmi ah xariga uga jaray duuliimaadkii ugu horeeyay ee si toos ah diyaarad ay leedahay shirkadda Kenya Airways ay ugu ambabaxdo magaalada New York ee Maraykanka.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga ayuu hoggaamiyaha dalka ku sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid isku xireysay Kenya iyo Maraykanka sido kalena fududeyn doonto fursadaha ganacsi, dalxiiska iyo xariirka ka dhexeya shacabka labada dal.
Diyaaraddan oo lagu magacaabo KQ Boeing 787-8 Dreamliner ayaa sidday rakaab dhan 234 qof oo ay ka mid yihiin wasiiradda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Monica Juma , safiirka Maraykanka ee Kenya Robert Godec, xoghayaha wasaaradda gaadiidka dalka Esther Koimett iyo madaxa fulinta ee shirkadda qaran ee duulimaadyada ee Kenya Airways Sebastian Mikosz.
15 saacadood kadib oo ay hawada ku jiro doonto waxaa la filaya inay 1:30 daqiiqo ee duhurnimo ee maanta ay ka caga dhigato gagida caalamiga ee JFK ee magaalada New York.
Munaasabadda xalay ka dhacday garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee JKIA , magaaladatani Nairobi ayaa waxaa goob joog ka ahaa barasaabka caasimadda dalka Mike Mbuvi Sonko, senetarka ismaamulka Elgeyo Marakwet , Kipchumba Murkomen, wasiirka arrimaha gudaha Fred Matiang’i , wasiiradda caafimaadka Sicily Kariuki ,Margaret Kobia oo ah wasiiradda adeega dadweynaha , wasiiradda waxbarashada Amina Maxamad ,Rashid Echesa oo ah wasiirka cayaaraha iyo mas’uuliyiin kale.
Diyaaradaha shirkadda Kenya Airways ayaa duulimaadyo ku tago ugu yaraan 40 magaalooyin oo ka tirsan Afrika , qaaradda Yurub , Aasiya iyo bariga dhexe.
← Guddiga TSC oo walaac ka muujiyay inay weli yartahay tirada barayaasha maadooyinka ugu muhiimsan
Kenya oo dhanka maamul wanaagga Afrika ka gashay nambarka 11-aad →